ယူနိုကျတကျအသငျးကိုအနိုငျမရခဲ့လို့ လီဗာပူးအသငျး ရမှတျ၂ မှတျအပွငျဘာတှဆေုံးရှုံးသှားခဲ့ရလဲ !!! - SPORTS MYANMAR
ယူနိုကျတကျအသငျးကိုအနိုငျမရခဲ့လို့ လီဗာပူးအသငျး ရမှတျ၂ မှတျအပွငျဘာတှဆေုံးရှုံးသှားခဲ့ရလဲ !!!
အိုးထရကျဖို့ဒျမှာ ကစားသှားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ မှာ ယူနိုကျတကျ အသငျးနဲ့ လီဗာပူး တို့ တဂိုးစီ သရေ ကခြဲ့ပါတယျ။ နညျးပွကလော့ပျရဲ့ လီဗာပူး အသငျးဟာ ၈ပှဲကစား ၈ပှဲအနိုငျနဲ့ အမှတျပေးဇယားကိုဦးဆောငျနပေမေယျ့ အိုးထရကျဖို့ဒျမှာတော့ ထုံးစံအတိုငျး အသညျးအသနျကစားခဲ့ရသေးတာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ဒီရာသီမှာ ရလဒျတှေ မတညျမငွိမျ ဖွဈနပွေီး အခုပှဲမတိုငျမီမှာ ၈ပှဲကစား ရမှတျ ၉မှတျနဲ့ အတူ အမှတျပေးဇယား အဆငျ့ ၁၄နရော အထိ ကရြောကျနတောဖွဈပါတယျ။နှဈသငျးကွား လတျတလော ခွစှေမျး နဲ့ ရမှတျကှာဟ ခကျြကွီးမားလှနျးနပေမေယျ့လညျး ယူနိုငျတကျအသငျးနဲ့ လိဂျအဝေးကှငျးပှဲတှမှော ရုနျးကနျထားရမှုကို လီဗာပူး အသငျး မခဖြွေတျနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ ခြဲဆီးလျ အသငျးနဲ့ ၄ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျကလှဲ ပွီး အခွားပှဲတှမှောတပှဲတဂိုးနှုနျးထကျတောငျပိုပွီးသှငျးယူနိုငျခွငျးမရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဒီလို တိုကျစဈ မြိုးကို လီဗာပူးအသငျးရဲ့ လူစုံပါဝငျလာတဲ့ခံစဈပိုငျးက ဦးဆောငျဂိုး အရငျခှငျ့ပွုခဲ့ရသေးတာဖွဈပါတယျ။
ပှဲခြိနျ ၃၆ မိနဈမှာ ရတျဖို့ဒျက ဒနျနီရယျဂြိနျးဈ ရဲ့ဖွတျတငျဘောကနေ အကောငျးဆုံး ပိတျသှငျးယူပေး ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ခကျြခငျြးဆိုသလိုပဲ မာနေးက လီဗာပူးအတှကျပွနျခပြေခဲ့ပမေယျ့ ဘောလုံးထိနျးရာမှာ လကျထိခဲ့တယျလို့ ကှငျးလယျဒိုငျက ယူဆပွီး VAR နဲ့ ပွနျကွညျ့အပွီးမှာ ပယျဖကျြသှားခဲ့လို့ လီဗာပူး အသငျးနဈနာခဲ့ရပါတယျ။
ဒုတိယပိုငျးမှာ ခြိနျဘာလိနျ၊ လယျလာနာ၊ ကီတာတို့ ဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး လီဗာပူး အသငျး ပထမပိုငျးထကျပိုကောငျးလာခဲ့ပါတယျ။ ခပြေဂိုးကိုလညျး လူစားဝငျကစားသမား လယျလာနာက ရျောဘတျဆနျရဲ့ ဖွတျတငျဘောကနေ လှတျလှတျပိတျသှငျးယူပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲ ရလဒျကွောငျ့ ယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ အဆငျ့ ၁၄ နရောက အဲဗာတနျ အသငျးထကျ ဂိုးကှာခွားခကျြ အသာရပွီး အဆငျ့ ၁၃ နရောကိုရောကျရှိသှားခဲ့ပါတယျ။လီဗာပူး အသငျးအတှကျ တော့ ဒီရာသီပထမဆုံး သရပှေဲဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ဇယားထိပျဆုံးကနေ ဆကျပွီးပွေးနနေိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ နညျးပွ ကလော့ပျရဲ့ လီဗာပူး အသငျးဟာအခု ပှဲစဉျမှာ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးသှားခဲ့လို့ ရငျးနှီးပေးဆပျလိုကျရတာတှကေတော့ ရမှတျ၂ မှတျထကျကို ပိုမြားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။သူတို့ဟာ အခုပှဲစဉျကိုသာ အနိုငျရခဲ့ပါက ခြဲဆီးလျအသငျးတို့တငျထားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ အဖှငျ့ပှဲ ၉ပှဲဆကျအနိုငျရတဲ့ စံခြိနျကို လိုကျမီသှားနိုငျမယျ့အနအေထားကနလှေဲခြျောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူး အသငျးသာ အခုပှဲကို အနိုငျရခဲ့ပါက နောကျထပျ လိဂျပှဲအဖွဈ လတျတလော အခွအေနဆေိုးနတေဲ့စပါးအသငျးကို အနျဖီးလျမှာ ဧညျ့ခံရမှာဖွဈလို့ စံခြိနျသဈပါ ရေးထိုးနိုငျဖို့ အခွအေနကေောငျးနတောဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျး ယူနိုကျတကျ အသငျးက ရပျတနျ့လိုကျတာကို ခံခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူး အသငျးဟာ အင်ျဂလနျ နိုငျငံရဲ့ အအောငျမွငျဆုံးအသငျးတသငျးအဖွဈ ယူနိုကျတကျ အသငျးနဲ့အတူ ရှိနပေမေယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျခတျေမှာတော့ တနျးယှဉျနိုငျခွငျးမရှိတော့တာဖွဈပါတယျ။လီဗာပူးတို့ဟာပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးမှာယူနိုကျတကျအသငျးကိုအိုးထရကျဖို့ဒျမှာ၅ပှဲသာ အနိုငျရထားဖူးသေးတာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ အသငျးကို ပရီးမီးယားလိဂျအဝေးကှငျးပှဲတှမှော အမြားဆုံးအနိုငျရထားတဲ့ အသငျးတှအေဖွဈတော့ မနျစီးတီး ( ရပှဲ) နဲ့ ခြဲဆီးလျ( ၆ပှဲ ) တို့ကရပျဆညျနတောဖွဈပါတယျ။အကယျ၍ လီဗာပူးအသငျးသာ အခုပှဲမှာ အနိုငျရခဲ့ပါက ခြဲဆီးလျအသငျးနဲ့ နိုငျပှဲအရအေတှကျ တူသှားဖို့ရှိနခေဲ့ပမေယျ့ လှဲခြျောခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ အသငျးကို အနိုငျမရခဲ့ လို့ လီဗာပူး အသငျး လကျလှတျလိုကျရတဲ့ အကွီးမားဆုံး စံခြိနျမှတျတမျးတခုကတော့ အင်ျဂလနျ ထိပျတနျး လိဂျမှာ ဆကျတိုကျနိုငျပှဲ အမြားဆုံးစံခြိနျပဲ ဖွဈပါတယျ။လတျတလောမှာ လီဗာပူးအသငျးက ၁၇ ပှဲဆကျတိုကျ အနိုငျရထားခဲ့တာဖွဈပွီး အခုပှဲစဉျကိုသာအနိုငျရခဲ့ပါက နိုငျပှဲဆကျမှု အမြားဆုံးအဖွဈ စံခြိနျတငျထားတဲ့ မနျစီးတီး အသငျး ( ၁၈ပှဲ )ကိုလိုကျမီနိုငျဖို့ ရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျ ပှဲစဉျမှာ ခွစှေမျးကဆြငျးနတေဲ့ စပါးကို အိမျကှငျးမှာ ရငျဆိုငျရဖို့ရှိနတောကွောငျ့လညျး အင်ျဂလနျထိပျတနျးလိဂျသမိုငျးမှာ ဆကျတိုကျနိုငျပှဲအမြားဆုံး စံခြိနျကိုတငျလိုကျနိုငျဖို့ပါမြှျောလငျ့ခှငျ့ရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျး ယူနိုကျတကျ အသငျးက မွို့ခံပွိုငျဘကျ ရဲ့ မှတျတမျးကောငျးတခုကို ကာကှယျပေးလိုကျသလို လုပျပေးနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူး တို့နိုငျပှဲဆကျမှု ရပျတနျ့သှားပမေယျ့ ဂုဏျယူစရာမှတျတမျးတခုကိုဆော့ဆကျပွီးမြှျောလငျ့ခှငျ့ရှိနသေေးတာဖွဈပါတယျ။သူတို့ဟာ အခုထိရှုံးပှဲမရှိနဲ့ ဦးဆောငျနတောဖွဈလို့ ရာသီကုနျအထိ ဆကျထိနျးထားနိုငျခဲ့ပါက အာဆငျနယျအသငျး ( ၂၀၀၃-၂၀၀၄ရာသီ )မှာရထားတဲ့ ရှုံးပှဲမရှိဗိုလျစှဲတဲ့ အသငျးစံခြိနျကို လိုကျမီနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုက်တက်အသင်းကိုအနိုင်မရခဲ့လို့ လီဗာပူးအသင်း ရမှတ်၂ မှတ်အပြင်ဘာတွေဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရလဲ !!!
အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ကစားသွားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် မှာ ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ လီဗာပူး တို့ တဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြကလော့ပ်ရဲ့ လီဗာပူး အသင်းဟာ ၈ပွဲကစား ၈ပွဲအနိုင်နဲ့ အမှတ်ပေးဇယားကိုဦးဆောင်နေပေမယ့် အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း အသည်းအသန်ကစားခဲ့ရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒီရာသီမှာ ရလဒ်တွေ မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေပြီး အခုပွဲမတိုင်မီမှာ ၈ပွဲကစား ရမှတ် ၉မှတ်နဲ့ အတူ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၁၄နေရာ အထိ ကျရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သင်းကြား လတ်တလော ခြေစွမ်း နဲ့ ရမှတ်ကွာဟ ချက်ကြီးမားလွန်းနေပေမယ့်လည်း ယူနိုင်တက်အသင်းနဲ့ လိဂ်အဝေးကွင်းပွဲတွေမှာ ရုန်းကန်ထားရမှုကို လီဗာပူး အသင်း မချေဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ ချဲဆီးလ် အသင်းနဲ့ ၄ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ကလွဲ ပြီး အခြားပွဲတွေမှာတပွဲတဂိုးနှုန်းထက်တောင်ပိုပြီးသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို တိုက်စစ် မျိုးကို လီဗာပူးအသင်းရဲ့ လူစုံပါဝင်လာတဲ့ခံစစ်ပိုင်းက ဦးဆောင်ဂိုး အရင်ခွင့်ပြုခဲ့ရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲချိန် ၃၆ မိနစ်မှာ ရတ်ဖို့ဒ်က ဒန်နီရယ်ဂျိန်းစ် ရဲ့ဖြတ်တင်ဘောကနေ အကောင်းဆုံး ပိတ်သွင်းယူပေး ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ မာနေးက လီဗာပူးအတွက်ပြန်ချေပခဲ့ပေမယ့် ဘောလုံးထိန်းရာမှာ လက်ထိခဲ့တယ်လို့ ကွင်းလယ်ဒိုင်က ယူဆပြီး VAR နဲ့ ပြန်ကြည့်အပြီးမှာ ပယ်ဖျက်သွားခဲ့လို့ လီဗာပူး အသင်းနစ်နာခဲ့ရပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာ ချိန်ဘာလိန်၊ လယ်လာနာ၊ ကီတာတို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး လီဗာပူး အသင်း ပထမပိုင်းထက်ပိုကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ချေပဂိုးကိုလည်း လူစားဝင်ကစားသမား လယ်လာနာက ရော်ဘတ်ဆန်ရဲ့ ဖြတ်တင်ဘောကနေ လွတ်လွတ်ပိတ်သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲ ရလဒ်ကြောင့် ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ အဆင့် ၁၄ နေရာက အဲဗာတန် အသင်းထက် ဂိုးကွာခြားချက် အသာရပြီး အဆင့် ၁၃ နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူး အသင်းအတွက် တော့ ဒီရာသီပထမဆုံး သရေပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဇယားထိပ်ဆုံးကနေ ဆက်ပြီးပြေးနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နည်းပြ ကလော့ပ်ရဲ့ လီဗာပူး အသင်းဟာအခု ပွဲစဉ်မှာ နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့လို့ ရင်းနှီးပေးဆပ်လိုက်ရတာတွေကတော့ ရမှတ်၂ မှတ်ထက်ကို ပိုများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ အခုပွဲစဉ်ကိုသာ အနိုင်ရခဲ့ပါက ချဲဆီးလ်အသင်းတို့တင်ထားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့်ပွဲ ၉ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့ စံချိန်ကို လိုက်မီသွားနိုင်မယ့်အနေအထားကနေလွဲချော်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူး အသင်းသာ အခုပွဲကို အနိုင်ရခဲ့ပါက နောက်ထပ် လိဂ်ပွဲအဖြစ် လတ်တလော အခြေအနေဆိုးနေတဲ့စပါးအသင်းကို အန်ဖီးလ်မှာ ဧည့်ခံရမှာဖြစ်လို့ စံချိန်သစ်ပါ ရေးထိုးနိုင်ဖို့ အခြေအနေကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း ယူနိုက်တက် အသင်းက ရပ်တန့်လိုက်တာကို ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူး အသင်းဟာ အင်္ဂလန် နိုင်ငံရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းတသင်းအဖြစ် ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့အတူ ရှိနေပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ခေတ်မှာတော့ တန်းယှဉ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးတို့ဟာပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းမှာယူနိုက်တက်အသင်းကိုအိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ၅ပွဲသာ အနိုင်ရထားဖူးသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အသင်းကို ပရီးမီးယားလိဂ်အဝေးကွင်းပွဲတွေမှာ အများဆုံးအနိုင်ရထားတဲ့ အသင်းတွေအဖြစ်တော့ မန်စီးတီး ( ၇ပွဲ) နဲ့ ချဲဆီးလ်( ၆ပွဲ ) တို့ကရပ်ဆည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ လီဗာပူးအသင်းသာ အခုပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ပါက ချဲဆီးလ်အသင်းနဲ့ နိုင်ပွဲအရေအတွက် တူသွားဖို့ရှိနေခဲ့ပေမယ့် လွဲချော်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အသင်းကို အနိုင်မရခဲ့ လို့ လီဗာပူး အသင်း လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ အကြီးမားဆုံး စံချိန်မှတ်တမ်းတခုကတော့ အင်္ဂလန် ထိပ်တန်း လိဂ်မှာ ဆက်တိုက်နိုင်ပွဲ အများဆုံးစံချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာ လီဗာပူးအသင်းက ၁၇ ပွဲဆက်တိုက် အနိုင်ရထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုပွဲစဉ်ကိုသာအနိုင်ရခဲ့ပါက နိုင်ပွဲဆက်မှု အများဆုံးအဖြစ် စံချိန်တင်ထားတဲ့ မန်စီးတီး အသင်း ( ၁၈ပွဲ )ကိုလိုက်မီနိုင်ဖို့ ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ပွဲစဉ်မှာ ခြေစွမ်းကျဆင်းနေတဲ့ စပါးကို အိမ်ကွင်းမှာ ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတာကြောင့်လည်း အင်္ဂလန်ထိပ်တန်းလိဂ်သမိုင်းမှာ ဆက်တိုက်နိုင်ပွဲအများဆုံး စံချိန်ကိုတင်လိုက်နိုင်ဖို့ပါမျှော်လင့်ခွင့်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း ယူနိုက်တက် အသင်းက မြို့ခံပြိုင်ဘက် ရဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းတခုကို ကာကွယ်ပေးလိုက်သလို လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူး တို့နိုင်ပွဲဆက်မှု ရပ်တန့်သွားပေမယ့် ဂုဏ်ယူစရာမှတ်တမ်းတခုကိုဆော့ဆက်ပြီးမျှော်လင့်ခွင့်ရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ အခုထိရှုံးပွဲမရှိနဲ့ ဦးဆောင်နေတာဖြစ်လို့ ရာသီကုန်အထိ ဆက်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါက အာဆင်နယ်အသင်း ( ၂၀၀၃-၂၀၀၄ရာသီ )မှာရထားတဲ့ ရှုံးပွဲမရှိဗိုလ်စွဲတဲ့ အသင်းစံချိန်ကို လိုက်မီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။